Baabtiiska, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Baabtiisku biyo waa calaamad u ah rumaystaha toobadkeenka, waa calaamad muujinaysa inuu aqbalo ciise masiix inuu yahay Sayid iyo Bixiyuhu inuu qayb ka yahay geerida iyo sarakicidda Ciise Masiix. Ku baabtiista "Ruuxa Quduuska ah iyo dab" waxaa loola jeedaa shaqada cusboonaysiinta iyo nadiifinta ee Ruuxa Quduuska ah. Kaniisadda Adduunweynaha ee Ilaah waxay ku dhaqmaan baabtiis baabtiis dhexdiisa. (Matayos 28,19:2,38; Falimaha Rasuullada 6,4:5; Rooma 3,16: 1-12,13; Luukos 1:1,3; 9 Korintos 3,16; Butros; Matayos)
Baabtiis - calaamad u ah injiilka
Ritualsku waxay qayb muhiim ah ka ahaayeen adeegga Axdigii Hore.Waxaa jiray sannadle, bille iyo cibaado maalinle ah. Waxaa jiray cibaado oo dhalasho iyo cibaado geeri ah, waxaa jiray cibaado cibaado, nadiifin iyo galitaan. Rumaysadku way ku lug lahaayeen, laakiin ma aysan ahayn wax caan ah.
Taa bedelkeeda, Axdiga Cusubi wuxuu leeyahay laba cibaado oo aasaasi ah: baabtiis iyo karaamado - labadaba ma laha tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo fulinayo.
Maxaa labadan? Maxaad ugu baahan tahay inaad ku cibaadeysato wax diin ah oo caqiido muhiim u tahay?
Waxaan u maleynayaa sababta ugu weyn inay tahay in Cashada Rabbiga iyo baabtiisuba ay calaamad u yihiin injiilka Ciise. Waxay ku celceliyaan waxyaabaha aasaasiga ah ee aaminsanaantayada. Aynu eegno sida kani u quseeyo baabtiiska.
Sidee bay baabtiiska u tahay astaanta runta ee injiilka? Rasuul Bawlos wuxuu qoray: «Mise ma waydaan ogayn in kulli inteena lagu baabtiisay Ciise Masiix lagu baabtiisay dhimashadiisa? Haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda, si, sidii Masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta Aabaha, inaguna aannu ku dhex socon karno nolol cusub. Maxaa yeelay, haddii aynu isaga ku xidhnaano oo aan isaga la mid nahay dhimashadiisa, innaguna waxaynu kula mid noqon doonnaa wakhtiga sarakicidda (Rooma 6,3-5).
Bawlos wuxuu yidhi baabtiisku wuxuu metelaa midnimadeena Masiixa dhimashadiisa, aaskiisa, iyo sarakiciddiisa. Kuwani waa qodobbada ugu horreeya ee injiilka (1 Korintos 15,3: 4). Badbaadadeenu waxay kuxirantahay dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa. Dambi dhaafkeena - ka sifaynta dembiyadayada - waxay kuxirantahay dhimashadiisa; Nolosheenna Masiixiyiinta iyo mustaqbalkeenu waxay kuxiran yihiin sarakiciddiisa noloshiisa.
Baabtiisku wuxuu daliil u yahay dhimashadeenii hore - qofkii hore ayaa iskutallaabta lagula qodbay Masiixa - oo waxaa lagu aasay Masiixa baabtiiska (Rooma 6,8; Galatiya 2,20; 6,14; Kolosay 2,12.20). Waxay astaan ​​u tahay aqoonsigeenna Ciise Masiix - waxaan u dhisi doonnaa bulsho mustaqbal leh isaga. Waxaan aqbalnaa in dhimashadiisu u dhacday "annaga", "dembiyadeenna". Waxaan qiraynaa inaan dembaabnay, inaan badanahay u janjeersanahay inaannu dembaabno, inaan nahay dembiilayaal u baahan Badbaadiye. Waxaan qiraynaa inaan u baahan nahay nadiifinta iyo nadiifintaan waxaa lagu sameeyaa dhimashadii Ciise Masiix. Baabtiisku waa hal dariiqo oo aan ku qiranno Ciise Masiix inuu yahay Sayidkeenna iyo Bixiyaha.
Baabtiisku wuxuu calaamad u yahay xitaa war ka sii wanaagsan - baabtiiskii waxaa nalagula soo sara kiciyey Masiix si aan ula noolaano isaga (Efesos 2,5-6; Kolosay 2,12-13.31). Waxaan ku leenahay nolol cusub oo waxaa naloogu yeedhay inaan ku noolaano dariiq cusub oo noloshu ku jirto, isaga oo ah Sayidkii na hagaya oo inaga kaxeeya jidadkeenna dembiga ah iyo waddooyinka caddaaladda iyo jacaylka. Sidan ayaan u muujineynaa tawbadkeenka, isbedel ku yimid qaabkeenna nolosha, iyo waliba xaqiiqda ah inaannan isbadalkan annaga lafteena ku imaan karin - waxay ku dhacdaa xoogga Masiixa sarakiciyay ee nagu nool. Waxaan ku aqoonsanay Masiixa sarakiciddiisa kaliya mustaqbalka, laakiin sidoo kale nolosha halkan iyo maanta. Tani waa qayb ka mid ah astaamaha.
Ciisena ma uusan abuurin cibaadada baabtiiska. Waxay ku dhex samaysatay diinta Yuhuudda waxaana u adeegsaday Yooxanaa Baabtiisaha dhaqan ahaan si ay u metelo toobad keena, oo ay biyaha u taagan tahay isdaahirinta. Ciise wuu sii waday hawshan iyo dhimashadiisa iyo sarakicistiisa ka dib, xertii waxay sii wadeen inay adeegsadaan. Waxay si layaableh u tusaysaa xaqiiqada ah in aan aasaas aasaas u leenahay nolosheenna iyo aasaas cusub oo loogu talagalay xidhiidhka aan la leenahay Ilaah.
Sababtoo ah waxaan helnay cafis oo layna daahiriyey dhimashadii Masiixa, Bawlos wuxuu gartay in baabtiisku macnaheedu yahay dhimashadiisa iyo kaqeybgalkeenna dhimashadiisa. Bawlos sidoo kale waxaa loo waxyooday inuu ku daro xiriirka la leh sarakicidda Ciise. Markaan ka soo kacno fontka baabtiiska, waxaan calaamad uga dhignaa sarakicidda nolol cusub - nolol Masiixa ku jirta, oo inagu dhex nool.
Butros sidoo kale wuxuu qoray in baabtiiska uu inaga badbaadinayo "sarakiciddii Ciise Masiix" (1 Butros 3,21). Baabtiiskii lafteedu na badbaadin maayo. Waxaan ku badbaadnay nimcada Ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga Ciise Masiix. Biyo ma badbaadin karaan. Baabtiisku wuxuu inaga badbaadiyaa dareenka ah inaan "ka barino Allah qalbi cad". Waxay wakiil u tahay muuqashadeena xagga Ilaah, aaminsanaanta Masiixa, cafiska iyo nolosha cusub.
Waxaa lagu baabtiisay hal jidh
Kaliya kuma baabtiiso Ciise Masiix, laakiin waxaan sidoo kale galay jidhkiisa, Kaniisadda. "Maxaa yeelay, kulligeen waxaa laydinku baabtiisay isku jidh qudha xagga ruux keliya ..." (1 Korintos 12,13). Tan macnaheedu waa in qof uusan is baabtiisi karin - tani waa in lagu sameeyo bulshada dhexdeeda Masiixiyiinta. Ma jiraan Masiixiyiin qarsoodi ah, dad rumeysan Masiixa, laakiin cidina kama oga. Qaabka Baybalku waa inuu qirto Masiixa hortiisa dadka kale, iyo inuu qirasho guud oo Ciise ah yahay Rabbi.
Baabtiisku waa mid ka mid ah qaababka lagu garan karo Masiixa oo ay saaxiibbada la baabtiisay oo dhan ay ku heli karaan ballan qaad. Tani waxay noqon kartaa munaasabad farxad leh halkaas oo kaniisaddu ay ku gabiso heeso ayna qofka ku soo dhoweyso kaniisada. Mise waxay noqon kartaa xaflad yar oo odaygu ku jiro (ama wakiil kale oo kaniisad oo la oggol yahay) wuu soo dhaweynayaa rumaystaha cusub, wuxuu ku celceliyey macnaha ficilka, wuxuuna ku dhiirrigelinayaa dadka lagu baabtiisay noloshiisa cusub ee Masiixa.
Baabtiisku asal ahaan waa caado muujineysa in qof mar hore ka noqday dembiyadooda, uu hore u aqbalay Masiixa inuu noqdo Badbaadiyaha, wuxuuna bilaabay inuu ku barbaariyo ruux ahaan - inuu runtii isagu hore u yahay Masiixi. Baabtiisku badanaa waxaa la sameeyaa marka qofku sameeyo nidar gal, laakiin marmarka qaarkood ayaa la samayn karaa goor dambe.
Dhallinta iyo carruurta
Ka dib marka uu qof rumeeyo Masiixa, asaga ama ayada waxay su'aal ka keenaan baabtiis. Tani waxay noqon kartaa haddii qofku cadaalad yahay ama da 'yar yahay. Qofka dhallinta yar waxaa laga yaabaa inuu muujiyo waxa uu rumeysan yahay oo ka duwan kan duugga ah, laakiin dadka dhallin-yarada ah weli way aamini karaan.
Ma laga yaabaa inay qaar ka mid ahi suurtagal tahay inay maankooda beddelaan oo ay iimaanka ka dhacaan mar labaad? Waxaa laga yaabaa, laakiin tani sidoo kale waxay ku dhici kartaa rumaystayaasha waaweyn. Ma waxaa loo rogi doonaa in qaar ka mid ah isbeddellada carruurtani ayan dhab ahayn? Laga yaabee, laakiin taasi sidoo kale waxay ku dhacdaa dadka waaweyn. Haddii qofku qoomamo qoomamo yeesho oo uu iimaanka ku qabo Masiixa, sida ugu wanaagsan ee wadaad u xukumi karo, qofkaas waa la baabtiisi karaa. Si kastaba ha noqotee, ma ahan dhaqankeena inaan ku baabtiiso caruurta yar yar adoon fasax ka helin waalidkood ama ilaaliyaasha sharciga ah. Haddii waaliddiinta ilmaha yari ka soo horjeedaan baabtiiska, cunugga rumeeysan Ciise ma ahan Masiixiis maxaa yeelay waa inuu sugaa ilaa ilmuhu ka weynaanayo si loo baabtiiso.
Waa dhaqankeena in lagu baabtiiso ku baabtiisida Kaniisadda Adduunka ee Ilaah. Waxaan aaminsanahay inay ahayd ficillada ugu badan ee Yuhuudda qarnigii hore iyo kaniisaddii hore. Waxaan aaminsanahay in isugeynta baabtiisku ay calaamad u tahay dhimashada iyo aasitaanka si ka wanaagsan rushaynta. Si kastaba ha noqotee, kama dhigno dariiqada baabtiisku inay tahay arrin muran badan ka dhalisay Masiixiyiinta.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in qofku ka tago nolosha hore ee dembiga uuna rumaysto Masiixa inuu yahay Sayidkiisa iyo Badbaadiyaha. Si loo sii wado tusaalaha dhimashada, waxaan dhihi karnaa inuu odaygu dhintay Masiixa, in maydka si sax ah loo aasay iyo inkale. Nadiifinta ayaa astaan ​​u ahayd, xiitaa haddii aaska aan la soo bandhigin. Noloshii hore way dhimatay nolosha cusubna way jirtaa.
Badbaadadu kuma xirna dariiqa saxda ah ee baabtiiska (Kitaabka Quduuska ah nama siiso faahfaahin badan oo ku saabsan nidaamka si kastaba ha noqotee), ama ereyada saxda ah, sida haddii ereyada se ay leeyihiin saameyn sixir. Badbaadadu waxay kuxirantahay Masiixa, mase aha qoto dheerida biyaha baabtiiska. Masiixi ah oo lagu baabtiisay tuurista ama shubeynta wali waa Masiixi ah. Uma baahnin mar kale baabtiis ilaa uu qof u arko inay ku habboon yihiin. Haddii midhaha nolosha Masiixiyada - in la bixiyo hal tusaale oo keliya - ay halkaas jirtey muddo 20 sano ah, looma baahna in laga doodo ansaxnimada xafladda dhacday 20 sano ka hor. Masiixiyaddu waxay ku dhisan tahay caqiido, mana aha gudashada caado.
Maahan dhaqankeena inaan baabtiiso dhallaanka ama carruurta aad uga yar inay muujiyaan iimaankooda, maadaama aan u aragno baabtiiska inuu yahay muujinta iimaanka, oo qofna uusan badbaadin caqiidada waalidiinta. Si kastaba ha noqotee, uma cambaareyn karno sida dadka aan Masiixiyiinta ahayn ee ku dhaqma baabtiisyada dhallaanka. Bal aan si kooban uga hadlo labada dood ee ugu caansan ee door bidida baabtiiska ilmaha.
Marka hore, Qorniinka sida Falimaha Rasuullada 10,44:11,44 ayaa noo sheegaya; 16,15 iyo 16,34 in guryihii oo dhan [qoysaska] la baabtiisay, iyo reeraha sida caadiga ah lagu daro dhallaanka qarnigii koowaad. Waa suurto gal in guryahaas gaarka ahi aysan lahayn caruur yar, laakiin waxaan aaminsanahay in sharaxaadda ugu fiican ay tahay in fiiro gaar ah la yeelo Falimaha Rasuullada 18,8 iyo oo sida muuqata qoysasku dhammaantood rumaysteen Masiixa. Uma maleynayo in dhallaanka ay leeyihiin iimaan dhab ah, carruurtuna kuma hadlaan afaf (Aayadaha 44aad). Waxaa laga yaabaa in guriga oo dhan la baabtiisay si la mid ah sida xubnaha reerku rumaysteen Masiixa. Taasi waxay la macno tahay in dhammaan kuwa da 'weynaa ee rumaysta ay iyaguna baabtiisay.
Dood labaad oo mararka qaar loo isticmaalo in lagu taageero baabtiiska ilmaha yar ayaa ah fikradda halboowlaha. Axdigii hore, carruurta waxaa lagu soo daray axdigii iyo dhaqankii gelitaanka axdiga ayaa la guday oo lagu sameeyay carruurta yaryar. Axdiga cusubi waa axdi ka sii wanaagsan oo leh ballamo ka wanaagsan, sidaas awgeed carruurta waa in si otomaatig ah loogu daraa oo lagu calaamadeeyaa xafladda horudhaca ee axdiga cusub, baabtiiskii horeba, carruurnimadiisii. Si kastaba ha noqotee, dooddan ma aqoonsana faraqa u dhexeeya kii hore iyo axdiga cusub. Qof ayaa galay axdigii hore waalidnimo, laakiin kaliya tawbadkeen iyo iimaan keliya ayaa geli kara axdiga cusub. Annagu ma aaminsani in dhammaan faracyada Masiixiyiinta, xitaa qarniyada saddexaad iyo afraad, inay si otomaatig ah u rumaysan doonaan Masiixa! Qof walba waa inuu rumaystaa naftiisa.
Muranka ka taagan habka saxda ah ee baabtiiska iyo da'da ilmaha la baabtiisay ayaa jiray qarniyo, doodooduna waxay noqon karaan kuwo ka sii adag sidii aan ku soo qeexey cutubyadii hore. Waxbadan ayaa laga sheegi karaa arintan, laakiin daruuri maahan waqtigaan.
Mararka qaarkood, qofka loo baabtiiso sidii ilmo yari waxa uu doonayaa inuu xubin ka noqdo Kaniisadda Adduunka ee Ilaah. Ma waxaan u maleyneynaa inay lagama maarmaan tahay in qofkan la baabtiiso? Waxaan u malaynayaa in tan lagu go’aaminayo kiis kiis, ku saleysan rabitaanka qofka iyo fahamka baabtiiska. Haddii qofku dhowaan uun gaadhay heer iimaan iyo cibaado leh, waxay u badan tahay inay habboon tahay in qofka la baabtiiso. Xaaladaha noocaas ah, baabtiisku wuxuu u caddayn qofka qofka tallaabada muhiimka ah ee iimaanka la qaatay.
Haddii qofka la baabtiisay caruurnimadiisii ​​oo uu sannado badan ku noolaa sidii Masiixi qaangaar ah oo miro wanaagsan leh, markaa uma baahnid inaan ku adkaysanno inaan isaga ku baabtiiso. Haddii aad weydiisato taas, dabcan waan jeclaan lahayn inaan samayno, laakiin ma aha inaanu ku murminno waxyaalaha ku saabsan dhaqannada la fuliyay tobanaan sano ka hor markii miraha Masiixiyiintu durba muuqdaan. Waxaan kaliya ammaani karnaa nimcada Ilaah. Qofkaasi waa Masiixi ah, iyadoo aan loo eegin in xafladda si sax ah loo qabtay.
Imaatinka Cashada Rabbiga
Sababo la mid ah awgood, waxaa naloo oggol yahay inaan la dabaaldeginno Cashada Rabbiga iyadoo lala socdo dadka aan lagu baabtiisay isla sidii aan isku barannay. Cabbirku waa aaminaad. Haddii labadeennuba iimaan ku leenahay Ciise Masiix, labadiinaba waannu isaga la wadaagnay, labadeenaba waxaa laydinku baabtiisay jidhkiisa qaab ama qaab midkood, oo waxaan ku wadaagi karnaa kibis iyo khamri. Waxaan kaloo qaadan karnaa karaamada haddii ay fikrad qaldan ka qabaan waxa ku dhaca rootida iyo khamriga. (Miyaynan kulligeen fikrad khaldan ka hayn waxyaabaha qaarkood?)
Waa inaanu ku mashquulin doodaha ku saabsan faahfaahinta. Waa aaminsanaanteena iyo ficilkeenna inaan ku baabtiiso kuwa waaweyna ee ku rumeysan kara Masiixa baabtiisa. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan u muujinno naxariis dadka leh caqiido kaladuwan. Waxaan rajeynayaa in hadaladaasi ay ku filan yihiin in la caddeeyo qaabkeenna illaa xad.
Aynu xooga saarno muuqaalka weyn ee uu rasuul Bawlos na siiyay: baabtiisku wuxuu astaan ​​u yahay nafteenna hore ee Masiixa kula dhimatay, Dembiyadeenna waa laga maydhay oo nolosheenna cusubi waxay ku nooshahay Masiixa iyo Kaniisadiisa. Baabtiisku waa muujinta toobadda iyo iimaanka - xusuusinta inaan ku badbaadno dhimashada iyo nolosha Ciise Masiix. Baabtiisku wuxuu matalaa injiilka wax yar - xaqiiqada udub dhexaadka iimaanka ee dib loo muujiyo markasta oo qofku bilaabo nolosha Christian.